Baayyee oduu nama gammachiisuu dha,,Dr. Zaalaalem ifajjeen ati gootee ilmaan Oromoo biraatti yoom iyyuu hin dagatamuu,,,Qabsoo ilmaan oromoo geeggeessaa jiruu keessaatti gootummaa kee fi Saboonummaa kee mirkaneesiiteetta,,,Lubbuu kee nuuf haa dheereessuu | freedomfororomo
Baayyee oduu nama gammachiisuu dha,,Dr. Zaalaalem ifajjeen ati gootee ilmaan Oromoo biraatti yoom iyyuu hin dagatamuu,,,Qabsoo ilmaan oromoo geeggeessaa jiruu keessaatti gootummaa kee fi Saboonummaa kee mirkaneesiiteetta,,,Lubbuu kee nuuf haa dheereessuu
Posted in: Uncategorized.	229 Comments
Dr. Zalaalam Abaraa irraa, biyya Finlaandii ti: “…. Afaan Oromoo akka barumsaatti akka dhiyaatu iyyannaa ani dhiyyeesse irratti hundaawuun “Kutaan Afaanii fi Aadaa Asiaa fi Afrikaaa” kun eega yeroo dheeraaf iyyannaa koo qoratee booda murtee haata’uu murteessra. Akka kanaan afaan Oromoo seena saa keessatti tarii yeroo jalqabaatiif University idle adunyaa irratti beekama ta’e tokko keessatti carraa afaanota kaan wojjin barattootaaf dhiyaachu argateera. Kanaafis waggaa haara kanaa jalqabee afaan Oromoo akka barnoota-afaan tokkotti barattootaaf dhiyaata. Murteen kun murtee seena qabeessa yeroo ta’u tarii seenaa afaan keenyaa keessatti Universitiin Helsinki afaan keenya barattootaaf dhiyeessuuf isa jalqabaa ta’unsa ni mala. Akkan giddu kana mirkaneefadhettis barattoonni fedha afaan kana baruu qaban kan biyya alaas, kan biyya keessas(domestic as well as exchange students) galmawani barnoota jalqabuuf eeggachaa jiru. Barumsi afaan Oromoos walkaa ji’a haara kanaa tii jalqabee kennama. Oromooti magaalota guguddaa, Amerikanii keessa kan akka Minneapolis, Atalanta, Wasdhington, Oregon, Philadelpia; Awroppaa keessa kan akka London, Oslo; Kanadaa keessaa, kan akka Torontoo fi akkasumas Autralia keessa jirattan akka koo kana bifa nam-tokketiinis ta’e bifa hawaasaatiin, Universitoota magaalaa keessan keessa jiran waliin mariyachuun afaan keenya akka barnootaaf dhiyaatu gochuu yaaluun yaada bayeessa natti fakkaata. “Boosettiin of gatteetu ‘dhirsakootu na gatee´jetti” jedhama. Diinni hanga fedhe ija jibbaatiin nuu laaleyyuu, nuyi hanga malee of jaallachuu qabna. Aadaa keenyaa afaan keenya kunuunsuu, guddisuu qabna…” Dr. Zalaalamiin tattaaffi bu’a qabeessa inni godhe kanaaf dinqisiifatchaa, galatoomin jennaan
Oromo Language and Culture Forum
← Both leaders are Two sides of One coin
Concern about two journalist held since June 2011 for “terrorism” →
229 comments on “Baayyee oduu nama gammachiisuu dha,,Dr. Zaalaalem ifajjeen ati gootee ilmaan Oromoo biraatti yoom iyyuu hin dagatamuu,,,Qabsoo ilmaan oromoo geeggeessaa jiruu keessaatti gootummaa kee fi Saboonummaa kee mirkaneesiiteetta,,,Lubbuu kee nuuf haa dheereessuu”
Abare Kebata on January 28, 2016 at 7:03 am said:
Baye natti Tole Qabsoo Ilman Oromoo Bara Kana Waqayoo Bara Bilisuma Nuf Ha Godhu
Wabi Dugasa on January 28, 2016 at 7:28 am said:
Jabadha Qabso Jabesa Oromoo Ka,ii
Wabi Dugasa on January 28, 2016 at 7:35 am said:
Waqayo Bekumsa Sif Bayisu Dacha Dachan Dr
Dagaagaa Wagane on January 30, 2016 at 3:40 pm said:
Thanks Dr Zele
Anonymous on January 30, 2016 at 5:55 pm said:
rabbumti si haa gargaaruu……………..
Abdurahamaan Hajjii Wotichaa on February 14, 2016 at 5:39 am said:
Jaabadhu!!!!!… Ati hayyu Oromotii.
mahmud Dadi on February 20, 2016 at 5:50 pm said:
rabbiin isin haa gargaaruu kun Giddina afaan oromooti
Bilisumm Fiqaaduu on February 28, 2016 at 12:04 am said:
Beektotni Oromoo kan biyya Alas ta’ee biyya dheeratu Yaalin isin Afaan Oromoo guddisuuf taasisaa Jirtan daran kan nama gammachiisudha galatoomaa!
Getachew Chala Amenu on March 3, 2016 at 7:48 am said:
Galatoomi Dr.Z…..Afaan keenya akka Addunyaa irraatti bekamuf gahe guddaa baha jirtu….nama akka keessaan nuf haa baay’aatan…..nuf haa jirta …….!!!!!!
Tamiru Ragasa on March 5, 2016 at 11:19 am said:
Dr zalaalam gudda galatoomi dirqama lammummaa baateetta akkanumaan itti Fifi nuuf jiraadhu
Tamiru Ragasa on March 5, 2016 at 11:20 am said:
Dr zalaalam gudda galatoomi dirqama lammummaa baateetta akkanumaan itti Fufinuuf jiraadhu
Nugusa Alemu on March 10, 2016 at 7:27 pm said:
Dr ulfadha kun jalqaba……..
JAFAR on March 12, 2016 at 10:50 am said:
Anonymous on March 13, 2016 at 10:48 pm said:
Obbo zalaalam ani umrrii tiyyasiif dabale ifiintuffadhe dhugaan anihoo?oromummaaf oromoof maalin gumaacha
Fuaad on March 13, 2016 at 10:52 pm said:
dinkisa shule on March 14, 2016 at 12:01 pm said:
jabaadhaa qunceen walgargaartee arba hiitii
ibsaa oromo on April 25, 2016 at 12:42 am said:
qabsoon umaata oromoo yoomile kan dhabatu miti itti fufa dinni nu hin rafne ilman oromo wayaanen demsa baqa irrata warregan rabbin janatan is an haa badhasu .
Tasfaayee on April 26, 2016 at 3:57 pm said:
waaqayyoo issa mirgaa siif kennef galaani hata’u D/r abjuu dhaloota wan miirkanessitef .dhaloonif seenaan siniraafatu,kan akkake dhugaan keessasa nyaatu uttuu jiirate guddatee guddisneera dagaagee dagaagsineera hundeessa akkuma gadiifagaate dameessas dagaagee biyyaa dhuuffata D/R zalaalem nuuf jiraadhu!
Mohammed Wariso on May 3, 2016 at 11:51 am said:
umrii dheeraa nuuf jiraadhu rabbiin ammas humnaa siif haa tahuu
Usman mohammad on May 10, 2016 at 11:19 am said:
Addunyarraa hanga jiru oromummaa keenya ifan gargarun:seena,afaan,dudhaa,aadaa , afoola,hogbarru artifi filmiin cimsun tokkumman dirqama oromumma haa tumsinu.
Anonymous on May 15, 2016 at 9:45 am said:
Baye Sii Jalalan Nuf Jiradhu
temesgen tadese on May 21, 2016 at 9:18 pm said:
kaayyo kee rabbi galmaan sif haa ga’uu fiixaan ba’iinsa gaarin sif hawaa
GEMECHIS HAILU on June 14, 2016 at 8:38 am said:
baayyee namatti tola lubbuunkee nuuf habulu.
Hayyuu Oromo Bilisa on June 15, 2016 at 3:29 pm said:
hayyee sanyii koo waqayyoon umurii dheraa sif haa latuu nu duratii bulii amalee nu ijooli kee dubaa keettin horodofaa jiraa.
Anonymous on June 30, 2016 at 3:30 pm said:
yaa ilmaam oromoo jabaadha
Anonymous on July 21, 2016 at 12:58 pm said:
Jireenyaa garii jiradha DR Zalalem
Milkiyaas tarfaasaa on July 23, 2016 at 12:57 pm said:
Guyyaa tokko garbumaa jala bana biyyota heduudha kan bilsa bahani yoo mana lejii nuf bantani malqaba akuma isani??
Chala Dabushe on August 17, 2016 at 3:47 am said:
Tattaffin keessan Cimee itti yaa Fufuu Galatoma!
filipos badane on August 23, 2016 at 2:26 pm said:
Burqaa Ganamoo on August 28, 2016 at 10:26 am said:
Namnni oromoo kamuu ofibeekuu qaba bakka jirutti!
lammi mitikku motummaa on August 29, 2016 at 5:16 pm said:
Dr zalalem lubbu kessan nuf haa dheratuu ifajii isiin ummataa oromoof gotaan isin galatefachisaa nuf jiradhaa kun injifanno bonsaadha
Soressa Taakkalaa on September 7, 2016 at 6:03 pm said:
Dr.Zalee qorannoo waa’ee afaaniifiaadaa irratti qabsoo ajaa’ibsiisaa gochaa jirtaniifgalanni keessan “OROMIYAA”bilisoomte haa ta’u!!!
Beley N d on November 7, 2016 at 6:14 am said:
Beley Negesa on November 7, 2016 at 6:23 am said:
Jabbadha waliin jira?!
msadii mumad on November 27, 2016 at 1:57 pm said:
shube on December 3, 2016 at 7:10 am said:
nuuf jiradhuu….rabbii sii haa tiksuu
mohammed khazali on January 17, 2017 at 11:18 am said:
baayee namaa gamaachiisa kun ifaajee hin argamnee bagaa sabaa koo taatee
Galaanaa Kabbee on February 21, 2017 at 2:36 pm said:
Qabsoo kee ittii fufii jabadhu rabbi sii waajiin jiraati !!!
Galanee on February 27, 2017 at 12:27 am said:
Anonymous on March 15, 2017 at 10:12 am said:
Rabbii umurii dheeraa siif haa kennu
Anonymous on March 31, 2017 at 4:53 pm said:
Anonymous on March 31, 2017 at 4:58 pm said:
duran dursee nagaa koo sif dhiyesa an naagadh ati nagadha nagan koo sibira naf haga,u
Ababach on April 2, 2017 at 3:52 pm said:
Anonymous on May 5, 2017 at 12:34 pm said:
Yaa Rabbi Bilisumma Waa Hunda Dadafi Nuu Fid Yaa Rabbi Nuu Awwaadhu
Anonymous on May 28, 2017 at 7:45 pm said:
Galatooma Urmmii Dheradhu.
Merga Solomon Daka on August 1, 2017 at 10:15 am said:
Ufee nama akkasi jiraa lubbuun kee haa dheraatu lammi dhugaa ijii hamman si hin argin
Rabumaa on August 19, 2017 at 10:03 pm said:
GALAATOMAA INJIFANON KAN UMAATAA OROMOOTI
Rabumaa on August 19, 2017 at 10:22 pm said:
WAAQAYO UMURI KESAAN HAA DHERESUU INJIFANON KAN UMAATAA OROMOOTI..WALISOO IRAA
Anonymous on September 3, 2017 at 7:51 am said:
Baay’ee (x100) nuuf galatoomi!!!!!!!!!!
Anonymous on September 4, 2017 at 6:05 pm said:
misensa ke ta.un barbada dr.Zalalam